आत्मअनुशासन ~ brazesh
June 28, 2015 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को १५५
वर्षौं लगाएर बनाइएका एक टुक्रा सडकका कालोपत्र हप्ता दिन नटिकी भत्किंदा पनि ठेकेदारलाई किन जाक्न सकिंदैन ? किनभने माथिदेखि तलसम्मकाले त्यो गुणस्तरहीन काम गर्नका लागि राज्यको ढुकुटीबाट निकालिएको सुकुटीका गच्छे र ओहदा अनुसारका टुक्रा चपाइसकेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारले हाम्रो सबै अंगहरुमा यति गहिरो जरा गाडिसकेको छ, कहिलेकहीं सोच्दा मात्र पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ । ट्यूमर जसरी फैलिएको यो भ्रष्टाचार नामको रोगले यसरी हामीलाई गाँजिसकेको छ, डर लाग्छ कतै त्यसलाई डाम्ने केमोले शरीर नै नाश पो गर्ने अवस्थामा पो हामी पुगिसकेको त हैनौं ?
मूल कुरोमा फर्किंदा अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको आत्म अनुशासनको अभाव हो । चारपाङ्ग्रे चलाउँदा अन्तरकुन्तरबाट छिर्ने भटभभटेलाई गाली गर्ने मान्छेले आफै भटभटे चलाउँदा पनि त्यसै गर्छ । यही प्रवृत्ति सबै कुरामा पालेर बसेका छौं हामी । हामी आफ्नो लागि र अरुको लागि भिन्दाभिन्दै मान्यताहरु लिएर बसेका छौं । यो बानीलाई परिमार्जन नगरी ठूलाठूला कुराहरुको आश गर्नु व्यर्थ हुन्छ । त्यसो नहुन्जेलसम्म कुनै पनि क्षेत्रका व्यावहारिक वा अव्यावहारिक कुनै पनि नियमकानूनहरु दिगो हुन सक्दैनन् ।